China Cotton Plain အမျိုးသမီး ၀ တ်တီရှပ်အင်္ကျီ PY-GTC001 ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်ရုံ | ပinyang
လက်ရှည် -6 ရှည်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝါဂွမ်းအမျှင်သည်အပူနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားညံ့ဖျင်းသောကြောင့်၎င်း၏အပူစီးဆင်းမှုကိန်းသည်အလွန်နိမ့်သည်။ ၎င်း၏ porosity နှင့် elasticity ကြောင့်လေအမျှင်များအကြားလေထုအမြောက်အများစုဆောင်းနိုင်သည်၊ လေသည်အပူအားနည်းသော conductor တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့်လျှပ်စစ်မီး။ ထို့ကြောင့်စင်ကြယ်သောဝါဂွမ်းဖိုင်ဘာအထည်အလိပ်များသည်ကောင်းမွန်သောအပူပေးစွမ်းနိုင်ပြီးချည်မျှင်အ ၀ တ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်လူတို့အားနွေးစေသည်။2a တီရှပ်ကိုဘယ်လိုဝတ်ရမလဲ။
အပြင်ထွက်ကြည့်ပါ - တီရှပ် + ကျယ်ပြန့်သော ဦး ထုပ်ဆောင်းထားခြင်းကြောင့်ကလေးများ၏အရေပြားရှိမယ်လနင်ဆဲလ်များသည်ရင့်ကျက်မှုမရှိသောကြောင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်မရှိသောကြောင့်အပြင်ထွက်သည့်အခါရှပ်အင်္ကျီရှည်သို့မဟုတ်လက်ရှည်ရှပ်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်။ ကလေးငယ်၏နူးညံ့သောအသားအရေကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။
ကလေးငယ်သည်ကောင်းမွန်သောလေထုစိမ်ထားနိုင်သောကျယ်ပြန့်သော ဦး ထုပ်ကို ၀ တ်ဆင်ထားနိုင်ပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းရည်ကိုလည်းကောင်းမွန်စေသော်လည်းအပူဒဏ်မှကာကွယ်နိုင်သည်။
၂။ ခရီးစဉ် - လက်ရှည်ရှပ်အင်္ကျီ + ဘောင်းဘီ
နွေရာသီတွင်မိဘများသည်မိမိတို့၏ကလေးများကိုကွင်းပြင်သို့ခေါ်ဆောင်လိုပါကအိမ်ပြင်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေနိုင်ပြီးနေလောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခြင်များ၊ ဆူးများ၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့်အခြားအရာများသည်သူတို့၏အရေပြားကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကလေးများအတွက်လက်ရှည်ဘောင်းဘီရှည်ကို ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းကောင်းစေရုံသာမကခြင်ကိုက်ခြင်း၊ ခြစ်ရာများနှင့်အခြားအခြေအနေများမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု - အုပ်စုလိုက်အ ၀ တ်အစား၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်စသည်တို့အတွက်အရောင်၊ ပုံစံ၊ လိုဂိုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
A ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်သောကလေးအဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။
A ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားအမှာစာနှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးအမိန့်ကိုလက်ခံပါသည်။
၃။ မေး။ ငါတို့လိုဂိုကိုပုံနှိပ်ထုတ်လို့ရလား။
ဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် customers'logo ကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။
4.Q Package သည်ကျွန်ုပ်၏လိပ်စာသို့ပေးပို့ရန်ဘယ်လောက်ကြာပါမလဲ။
A DHL, UPS, EMS, 4PX ဖြင့်သင်၏လိပ်စာရောက်ရှိရန်အလုပ်ရက် ၃-၁၀ ခန့်ကြာမည်။ ပြီးတော့သင့်ရဲ့လိပ်စာကိုပင်လယ်ကရောက်ဖို့အလုပ်ချိန် ၂၅-၃၅ လောက်ကြာလိမ့်မယ်။
5.QI ကစတိုင်လ်ပိုချင်တယ်၊ နောက်ဆုံးကိုးကားစရာစာရင်းကိုငါဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
A သင်ကကုန်သွယ်ရေးမန်နေဂျာ (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ကတ်တလောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးမည်။
A အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီနမူနာအတည်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ပေးပါမည်။ ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးပြည့်မီသောအရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသောအရည်အချင်းကိုစစ်ဆေးသောနမူနာနှင့်အညီထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထုပ်ပိုးမှု၏တိကျမှုကိုလည်းအာမခံပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနမူနာကိုသင့်ထံပို့ပေးပါမည်။ စစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။
7. Q သင့်ထုတ်ကုန်များသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။ ငါတို့ကလေးအတွက်လုံခြုံလား။
A ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် Eco-friendly ဖြစ်ပြီး SGS လက်မှတ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင့်ကလေး၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ Crew လည်ပင်းတိုတိုတီရှပ် PY-TD001
နောက်တစ်ခု: ၈ နှစ်သမီးအရွယ်မိန်းကလေးတီရှပ် PY-GD001
PY-TC002 အမျိုးသမီးဝတ်တီရှပ်လက်ရှည်နှင့်နွေ ဦး ရာသီဖြစ်သည်
၈ နှစ်သမီးအရွယ်မိန်းကလေးတီရှပ် PY-GD001
အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အထိလက်တိုကလေးတီရှပ် PY-TC003
ရေရှည်လက်ရှည်ကလေးတီရှပ် PY-TC004 ကိုရောင်းသည်
စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သောပုံစံများလက်ရှည်ပါတီရှပ် P ...
Crew လည်ပင်းတိုတိုတီရှပ် PY-TD001